राष्ट्रपतिलाई बिनुको प्रश्न- श्रीमानको हत्यारा खोज्ने कि अर्काका हत्यारालाई छुटाउने ? | Online Nepal
राष्ट्रपतिलाई बिनुको प्रश्न- श्रीमानको हत्यारा खोज्ने कि अर्काका हत्यारालाई छुटाउने ?
चितवन । तरुण दल चितवनका तत्कालिन अध्यक्ष शिब पौडेलको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका तीन जनाले प्रजातन्त्र दिवसको अबसरमा आममाफी पाएको भन्दै पौडेल परिवारले पत्रकार सम्मेलन गरी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
चितवनमा गुण्डागर्दीमा कहलिएका शिव पौडेल केरावारीमा भएको गोली काण्डको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा कारागारमा हत्या भएको थियो ।२०६८ साल मंसिर २० गते पौडेलमाथि आक्रमण भएको थियो ।
गुण्डागर्दीमार्फत पौडेलले अबैध सम्पत्ति कमाएका थिए। पौडेललाई कारागारमा कांग्रेसका नेताहरुले भेटेपछि बिरोधीलाई उनले भातका डल्लाले आक्रमण गर्दा सांघातिक आक्रमण भएको थियो।
पुस २ गते काठमाडौंको न्यूरो अस्पतालमा पौडेलको मृत्यु भएको थियो । मृत्युपछि परिवारको जाहेरीले २० वर्ष जेल सजाय भोगिरहेका मध्ये यही फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवसको अबसरमा फडिन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल केसी र दिल वहादुर लामालाई आममाफी दिइएको थियो ।
उनीहरुलाई असल चालचलन भन्दै आममाफी दिइएको थियो ।
उनीहरुलाई आममाफी भए पछि परिवारले देशमा न्याय हराएको महशुश गरिरहेको पौडेल पत्नी विनु रायमाझी पौडेले वताइन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताको झुण्ड बढाउन ज्यानमाराहरुलाई आममाफी दिएको आरोप लगाइन ।
पौडेलले भनिन, ‘एउटै परिवारका दुई भाई मारेर सजाय भोगीरहेकालाई आममाफि दिइनु कतिको जायज हो । हत्यारा ठहर भएकालाई आममाफी दिदाँ पीडित परिवारको मनमा के हुन्छ भनेर सोच्नु पर्दैंन? । अहिलेको घटनाले देशमा न्याय हराएको महशुश भएको छ ।’
पौडेलले राष्ट्रपति देशको राष्ट्रपति नभई अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ओली समुहको राष्ट्रपति भएको अरोप लगाइन । उनले भनिन, ‘राष्ट्रपतिले अहिले आफ्नो श्रीमानको हत्यारा खोज्नु पर्ने हो की? अर्काका हत्यारालाई छुटाउने हो ।’ उनीहरुलाई के कारणले माफी दिइएको हो ? उनको प्रश्न थियो ।
पौडेलका भाई गोविन्द पौडेलको हत्याको आरोपमा उनीहरुलाई पाँच/पाँच वर्षका लागि कैद सजाय भएको थियो । उनीहरुले गोविन्दको वि.सं. २०६६ साल जेठ ३ गते हत्या गरेका थिए । कारागारमा रहेको समयमा सोही समुहले शिव पौडेललाई कारागारमा नै रहेका सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलका छोरा शिविनजंग पौडेलले आँफुहरुले न्याय नपाउनु भनेको विडम्बना भएको बताए । कारागार भित्र २० वर्ष कैद सजाय भएका व्यक्तिलाई आममाफिका नाममा दिइएको उन्मुक्तिले आँफुहरुलाई त्रास वढाएको उनको भनाई थियो ।
शिव पौडेलका हत्यारालाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिएकोमा तरुण दलद्वारा आन्दोलन गर्ने निर्णय
तरुण दलले भन्याे-राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाऔं
तरुण दलका अध्यक्षद्वारा वीपी जयन्तीको अवसरमा दुई अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
तरुण दलले भन्याे – स्वास्थ्यकर्मीले हाम्रै ज्यान बचाउने हुन्, दुर्व्यवहार नगरौँ
तरुण अध्यक्षको चेतावनीपछि धरानका भीसी गले, बीपीको तस्बिर ठाउँ सारेर स्थापना
विप्लवसँगको वार्ताको नयाँ अध्याय, एकै दिन दुई चरणको वार्ता
प्रचण्ड-माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा
बालुवाटारमा सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता
प्रचण्ड–नेपाल समूहको पेरिसडाँडामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै
रुसी उच्च अधिकारीमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध
जनताका लागि सरकार कम्फर्टेबल रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी